Serivisy vaovao an'ny ITwin Cloud ho an'ny kambana nomerika nomerika nomerika - Geofumadas
Oktobra, 2019 fanavaozana, Microstation-Bentley
Ny kambana nomerika dia miditra ao amin'ny ankalamanjana: orinasan'ny injeniera ary tompon'ny orinasa. Ataovy amboarina ny faniriana kambana nomerika
SINGAPORE - The Taona tao amin'ny Infrastructure 2019- 24 Oktobra 2019 - Bentley Systems, Incorporated, mpamatsy rindrambaiko feno sy serivisy cloud an'ny kambana nomerika, dia nanolotra serivisy rahona vaovao ho an'ny kambana nomerika nomerika injeniera. Ny kambana nomerika dia fisehoana nomerika momba ny fananana ara-batana sy ny fampahalalana momba ny injeniera ao aminy, izay ahafahan'ny mpampiasa mahatakatra sy maodely ny zava-bitany amin'ny tontolo tena izy mandritra ny androm-piainany. Eny tokoa, ny kambana nomerika "evergreen" dia manome hery ny BIM sy GIS amin'ny alàlan'ny 4D.
Keith Bentley, mpanorina sy lehiben'ny teknolojia lehiben'ny teknolojia, dia nilaza: "Androany izao" vanim-potoana amin'ny zaza kambana nomerika "ary mihodina haingana ny asany. Ireo mpampiasa voalohany izay efa niarahantsika niasa dia efa nitazona ny toerana mpitarika tao amin'ny toekarena kambana digital vaovao, mankany amin'ny fanavaozana eo amin'ny fizotrany ara-barotra sy ny modely asainy. Ny tombony azo avy amin'ny fanoloana ireo làlan-jotra vita tamin'ny taon-dasa sy efa tapaka vita amin'ny taratasy, miaraka amin'ny kambana nomerika nomerika misimisy, azo antoka. Miara-miasa amin'ny ekosistika fanavaozana amin'ny alàlan'ny sehatra open source no mamorona hery tsy mijanona ho an'ny fanovana fotodrafitrasa. Tsy tadidiko ny fotoana mampientam-po kokoa ho an'ny matihanina fotodrafitrasa na ny Bentley Systems. "
Ny serivisy vaovao ao amin'ny rahona digital twins
Ny serivisy ITwin dia mamela ny orinasan'ny injeniera hamorona, hanao sary an-tsaina sy hamakafaka ireo kambana amin'ny fotodrafitrasa iraisana sy fananana. iTwin Services dia manambatra ny votoatin'ny injeniera dizitaly amin'ny famolavolana BIM sy ny angon-drakitra marobe, amin'ny fanatanterahana ny “visualization 4D” zaza kambana nomerika, ary ny firaketana an-tsoratra ny fiovana injeniera miaraka amin'ny fandaharam-pianarana / fananana, hanomezana fandraisana andraikitra tompon'andraikitra hoe iza no nanova ny inona ary rahoviana. Ny ekipa injeniera dia mampiasa ny servisy iTwin mba hanatanterahana hevitra sy fanamarinana ny angon-drakitra amin'ny famolavolana ary hiteraka fahalalana / famoronana. Ireo mpampiasa ny rindranasa Bentley dia afaka mampihatra ny serivisy iTwin Design Review ho an'ny famerenana ny famolavolana ad hoc, ary ireo ekipa tetikasa mampiasa ProjectWise dia afaka manampy ny serivisy iTwin Design Review amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny atiny nomerika. tetikasa amin'ny ankapobeny.
PlantSight dia tolotra niarahan'ny Bentley Systems sy Siemens natambatra, izay manome ny mpandraharaha tompona sy ny injenieran'izy ireo ny fahaizana mamorona kambana dizitaly maharitra mandrakizay amin'ny fizotry ny asa. PlantSight dia manohana ny fiasa, ny fikojakojana ary ny injeniera hahazoana ny angon-drakitra kambana nomerika azo antoka sy marina amin'ny fomba lalina, ao anatin'izany ny P&ID, maodely 3D, ary angona IoT.
Manome fahitana manokana momba ny zavamisy ao amin'ny modely fampahalalana voamarina izany, manamora ny fahatsiarovan-tena ara-toekarena, tsipika fijerena ary fahatsiarovan-tena amin'ny teny manodidina. Ny PlantSight dia novolavolain'i Bentley sy Siemens tamin'ny fampiasana an'i iTwin Services ary azo amidy ara-barotra amin'ny orinasa rehetra.
iTwin Immersive Asset Service dia mamela ny mpandraharaha tompona izay mampiasa AssetWise hampifanaraka ny angon-drakitra fampiasa amin'ny fananana sy ny famakafakana an-tsehatra amin'ny sehatry ny kambana dizitaly, manao izay hampahalalana ny mombamomba ny injeniera ho azon'ny mpihaino malalaka amin'ny alàlan'ny traikefa misy azy. mpampiasa mpampiasa rendrika sy intuitive. Ny serivisy asan'ny iTwin Immersive Asset dia mampiseho "hevitra manakiana" momba ny hetsika sy fanovana ny toeran'ny fananana rehefa mandeha ny fotoana, izay mitondra mankany amin'ny fanapahan-kevitra haingana haingana sy tsara kokoa izay manampy amin'ny fanatsarana ny fampandehanana ny fananana sy ny tambajotra.
Miditra ao amin'ilay seho lehibe ny kambana nomerika
Ny zava-misy tsy an-kijanona ara-batana ny fananana efa niasa taloha dia sarotra ny maka sary an-tsary sy havaozina hatrany. Ankoatr'izay, ny fampahalalana momba ny injeniera mifanandrify, amin'ny endrika rakitra tsy mitovy ary ny fanovana tsy miova, dia "data manjombona", amin'ny alàlan'ny tsy misy na tsy azo ampiasaina. Miaraka amin'ny serivisy rahona kambana, Bentley dia manampy ireo mpampiasa hamorona sy hisafidy kambana nomerika hanatsarana ny fandidiana sy ny fikojakojana ny fananana ara-batana, rafitra ary fomba fananganana, amin'ny alàlan'ny sary an-tsaina ao amin'ny 4D sy ny fahitana arak'asa.
Nandritra ny fihaonan'ny Bentley tamin'ny taona Inrastruktur 2019, ny fandrosoana kambana nomerika dia naseho tamina tetikasa finoa 24 tamin'ny sokajy 15, any amin'ireo toerana manodidina ny firenena 14 miainga avy amin'ny fitaterana, tambazotra rano ary zavamaniry fitsaboana, ho an'ny zavamaniry, vy sy trano Amin'ny ankapobeny, ny mpifaninana 139 amin'ny sokajy 17 dia nilaza ny tanjon'ny kambana nomerika ho an'ny fanavaozana ampiasaina ao amin'ny tetikasany, fitomboana lehibe amin'ny laharana 29 mifandraika amin'ny 2018.
Hevitra momba ny zaza kambana amin'ny hetsika
Tamin'ny lahatenin'ny teknolojia, i Keith Bentley dia nanatevin-daharana ny sehatra niaraka tamin'ny solontena avy any Sweco sy Hatch, izay mampiseho ny hevitry ny kambana fotodrafitrasa kambana amin'ny hetsika.
Sweco nampidirina nomerika sivily ny rafi-pitaterana hazavana sivy kilometatra ho an'ny tanànan'i Bergen any Norvezy. Ny fanitarana ny rafitra efa misy dia tanterahana amin'ny alàlan'ny modely 3D BIM, avy amin'ny fikarohana hafa ho an'ny endrika famolavolana injeniera amin'ny antsipiriany. Ny fampiasana ny serivisy iTwin dia nahafahan'i Sweco hanara-maso ny fanovana ho azy ary hampihena ny lesoka, ahafahana mijery 4D sary.
Hatch nahavita ny varotra mialoha, azo atao ary ny injeniera amin'ny antsipirihany ho an'ny fametrahana asidra solifara ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo. Ny rindrambaiko famolavola an'i Bentley dia namela ny ekipa tetikasa hamolavola kambana nomerika feno sy marani-tsaina amin'ny ambaratonga faran'izay bitika indrindra, mamindra ny fizotran'ny kalitaon'ny injeniera ho ampahany amin'ny ezaka modely 3D, raha oharina amin'ireo fizotry ny. Kalitao mifototra amin'ny sarin'ny nentim-paharazana. Hatch dia afaka nampihena ny fitomboan'ny famokarana taorian'ny fanombohan'ny volana enina ka hatramin'ny herinandro.
Microsoft Mamorona prototypes kambana nomerika ao amin'ny foibeny any Azia any Singapore izy sy any amin'ny campus Redmond. Ny vondrona Microsoft Real Estate and Security dia mametraka fomba fiasa amin'ny kitapom-piainan'ny Digital Digital Life Life to optimize trano fampisehoana, tombony, fahafaham-po amin'ny mpiasa, famokarana ary fiarovana. Ny ezaka ataon'i Microsoft amin'ny famoronana endrika nomerika ny fananana ara-batana toa ny tranobe dia miorina amin'ny Microsoft Azure Digital Twins, serivisy IoT izay manampy ireo fikambanana amin'ny famoronana modely nomerika feno tontolo iainana ara-batana. Azure Digital Twins dia navotsotra tamin'ny besinimaro tamin'ny 2018 ary naterin'ny mpanjifan'ny Microsoft sy mpiara-miombon'antoka manerantany amin'izao fotoana izao, anisan'izany i Bentley for it's iTwin Services. Ny orinasa dia miara-miasa mba hamorona kambana nomerika an'ny trano vaovao Microsoft any Singapore.
Ekolojia kambana nomerika
Na ny iTwin Services sy ny PlantSight dia samy novolavolaina niaraka tamin'ny sehatra open source iModel.js ho an'ny kambana nomerika, izay natomboka voalohany tamin'ny volana Oktobra 2018 ary nahatratra ny dikany 1.0 tamin'ny volana jona 2019. Ny antony iray lehibe amin'ny fanokafana ny kaody iModel.js dia ny fananganana tontolo iainana fanavaozana ho an'ny mpamorona rindrambaiko kambana nomerika, tompony, injeniera ary ho an'ny mpampikambana nomerika.
Iray amin'ireo mpamorona rindrambaiko ecosystem ireo ny vGIS Inc., izay nampiasa iModel.js hampiditra vahaolana mifangaro (XR) mifangaro ho an'ny kambana foto-drafitrasan'ny fitaterana nomerika. Ny fampiharana finday mifangaro ao anatiny dia hita fa manambatra ireo modely amin'ny famolavolana tetikasa miaraka amin'ny zava-misy, eo amin'ny sehatra, amin'ny tena fotoana. Ireo mpampiasa eny an-tsaha dia afaka mahita ny fampitaovana ny ambanivohitr'afo, toy ny fantsona sy ny tariby, mifangaro ao anatin'ny tontolo iainany tanteraka. Ny mpampiasa dia manondro zavatra fotsiny amin'ny alàlan'ny findainy mba hahitana ireo singa manamboatra ny tetik'asa amin'ity toe-javatra ity.
Alec Pestov, mpanorina sy Tale Jeneralin'ny vGIS, dia nilaza hoe: "Ny sehatra iModel.js dia loharano lehibe hananganana sy fampidirana ireo fitaovana sy serivisy fampidirana lanja, toy ny zava-misy efa lehibe sy ny vahaolana iraisan'ny vGIS. Tianay ny fifandraisan'ny serivisy tonga lafatra amin'ny serivisy iTwin sy ny làlan-javitany tsy misy tohaka ahafahana manatratra izany fampidirana tonga lafatra izany, ary antenainay ny hanitatra ny tanjaky ny fiaraha-miasa amin'ny alàlan'ny serivisy iTwin «.
Famaritana ny kambana nomerika
Ny kambana nomerika dia fisehoana nomerika momba ny fananana sy rafitra ara-batana amin'ny toe-javatra manodidina azy, izay misy ny fampahalalana momba ny injeniera, mba hahafantarana sy hanome endrika modely. Toy ny tena asehon'ny tany misy azy ireo dia miova foana ny kambana nomerika. Nohavaozina hatrany hatrany ireo loharanom-baovao marobe, anisan'izany ny sensor sy drone, hisolo tena ny fanjakana amin'ny fotoana mety na ny fiasan'ny asan'ny fotodrafitrasa ara-batana tena misy. Eny tokoa, ny zaza kambana nomerika, - amin'ny fampifangaroana ny toe-javatra nomerika ary ny singa nomerika miaraka amin'ny filozofia nomerika, Mialoha ny BIM sy GIS amin'ny alàlan'ny 4D.
Soa azo avy amin'ny kambana nomerika
Ny kambana nomerika dia mamela ny mpampiasa hijery ny fananana iray manontolo, ao anaty navigateur web, takelaka na misy headet real reality; ahafahana manamarina ny sata, manao fanatontosana ary mamokatra fampahalalana mba haminavina sy hiantohana ny fanatontosana ny fananana. Ireo mpampiasa dia afaka manangana nomerao alohan'ny fananganana ara-batana, drafitra ary famongorana ireo hetsika fikojakojana alohan'ny hanatanterahany azy ireo amin'ny tena izy. Izao izy ireo dia manana rindrambaiko arak'izy ireo hanoratana sary an-jatony, manararaotra ny fianarana milina hampitaha ny endrika fanamboarana na paikady fikojakojana ary manatsara ny endriny marobe. Ny fahitana an-tsary sy ny fanabeazana momba ny angon-draharahan'ny injeniera dia mitarika amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara sy fandraisana anjara mavitrika mandritra ny androm-piainan'ny fananana.
Momba ny Serivisy Bentley iTwin
Ny serivisy ITwin dia mamela ny ekipa tetikasa sy ireo mpandraharaha tompony mba hamorona, sary an-tsaina ao amin'ny 4D ary hamakafaka ireo zaza kambana an'ny fotodrafitrasa. Ny serivisy ITwin dia mamela ny mpandrindra fampahalalana nomerika hametraka ny angon-drakitra injeniera noforonin'ny fitaovana famolavolana isan-karazany ho kambana dizitaly mivantana ary hampifanaraka azy ireo amin'ny alàlan'ny modely misy azy sy ireo angon-drakitra hafa mifandraika amin'izany, tsy hanelingelina ny fitaovana na ny fombany ankehitriny. Ireo mpampiasa dia afaka mijery sy manara-maso ny fiovan'ny injeniera amin'ny alàlan'ny fandaharam-potoanan'ny tetikasa, manome an-tsoratra ny andraikitra momba ny nanova ny inona sy rahoviana. Ny serivisy ITwin dia manome fampahalalana azo ampiharina ho an'ireo voakasiky ny fandraisana fanapahan-kevitra manerana ny fandaminana sy ny fizotry ny fananana. Ireo mpampiasa izay mandray fanapahan-kevitra tsara dia tsara sy manantena ary misoroka olana alohan'ny hivoahany, ary mihetsika haingana haingana amin'ny fahatokisana feno, izay mandika ho amin'ny fitahirizam-bola, manatsara ny serivisy, tsy misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana sy ny fanatsarana ny filaminana.
Bentley Systems no mpamatsy vahaolana eran'izao tontolo izao ny vahaolana lozisialy ho an'ny injeniera, arsiteky, matihanina geospatial, mpanorina ary mpandraharaha amin'ny famolavolana, fametrahana sy fananganana fotodrafitrasa, ao anatin'izany ny asan'ny daholobe, serivisy ho an'ny daholobe, ny zavamaniry ary tanàna nomerika. Misokatra ny fampiharana modely miorina amin'ny Bentley MicroStation sy ny fampiharana simulation misokatra hanafaingana ny fampidirana fifangaroana; Ny ProjectWise sy ny SYNCHRO dia manolotra ny hanafainganana ny serivisy tetikasa; ary ny AssetWise dia manolotra haingam-pandeha ny fananana sy fampiasa amin'ny tambajotra. Manarona ny fotodrafitrasa misy ny fotodrafitrasa, ny serivisy iTwin Bentley dia mandroso be ny BIM sy GIS amin'ny alàlan'ny kambana nomerika 4D.
Bentley Systems dia mampiasa mihoatra ny 3.500 mpiara-miasa, mamokatra vola isan-taona amin'ny $ 700 tapitrisa ao amin'ny firenena 170 ary namatsy vola 1 miliara mihoatra ny $ 2014 miliara amin'ny fikarohana, fampandrosoana ary famokarana avy amin'ny 1984. Hatramin'ny nananganana azy tao XNUMX, ny orinasa no fananana lehibe indrindra amin'ireo mpanorina azy dimy, dia ny rahalahin'i Bentley. www.bentley.com
Previous Post«Previous «EthicalGEO» - ny filàna hijerena ireo loza mety hitranga amin'ny fironana ara-jeografia
Next Post Herintaona hafa, dingana iray hafa, traikefa nahafinaritra hafa… Izany no YII2019 ho ahy!manaraka »